Puntland oo Halaq Mareen Noqotay[maqaal] • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / Puntland oo Halaq Mareen Noqotay[maqaal]
Puntland oo halaq mareen noqotay ka dib markii degmada xaafuun ee gobolka Karkaar ay gaareen koox ajaaniib ah oo aan haybtooda la aqoon oo watay baabuuro aan xabadu karin oo ka kooban ku dhawaad 10 qof, kuwasoo safar dhulka ah kaga soo talaabay soohdinta ay wadaagaan Puntland iyo somaliland, iyagoo aan wax sharci iyo ogolaansho midna ka haysan Puntland.
Kooxdaas markii ay tageen xaafuun waxay bilaabeen inay sawiro ka qaataan goobo u tilmaansanaa oo ay horay qorshaha ugu soo darsadeen dhulkaasoo isugu jira godad, daaro qadiimi ah iyo bartilmaameedyo u qorshaysnaa oo ay khariidadohooda wateen (map).
Markii ay danahooda ka soo fushadeen goobihii ay u socdeen waxay galeen magaalada Garowe oo ay markii horeeto barbar mareen.
Ilaa iyo hadda lama hayo wax war ah oo ka soo baxay Dowladda Puntland, oo tafaasiil ka bixinaya ajaaniibtaan jisiyadooda, meelaha ay ka soo socdaaleen iyo shaqooyinka ay u tageen Xaafuun fasax la’aan.
Warar aan la cadayn ayaa sheegay in soo laabashooda uu amar ku bixiyay Madaxweyne ku xigeenka ka dib markii loo sheegay inaysan u warhayn masuuliyiinta amniga soo gelitaankooda gudaha Puntland, waxaan shacabku eedaymo u soo jeedinayeen Wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga oo howshoodii gabay, shacabkana aan waxba kala socodsiin arrimahaas.
Waxaana arrin la yaab leh Puntland oo noqotay Dal furan badda, Berriga iyo cirkaba in ciddii doonta soo gasho oo aan waxba la weydiin tusaalena ay kugu filan tahay, shisheeye aan fasax qaadan oo soo galay dalka iyo kumanaalka Itoobiyaanka ah oo sida sharci darada ah u soo gelaya Puntland ugana dhoofaya, ganacsi aan fasax lahayna uga furta.